Forum serasera malagasy Genesisy, Evanjely sy ny resaka evôlisiona vs famoronana, fizaràna fahadimy - Dinika forum.serasera.org
Genesisy, Evanjely sy ny resaka evôlisiona vs famoronana, fizaràna fahadimy
Fitohizan'ny hafatra : Genesisy, Evanjely sy ny resaka evôlisiona vs famoronana, fizaràna fahadimy
Nehemiah - 27/04/2013 14:00
T@ 1859, nivoaka ilay boky fanta-daza dia fanta-daza (tsy maintsy misy toerana iray @'izao tontolo izao anaovana printy an'io boky io, indray mandeha isan-taona) mitondra ny lohateny hoe "On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life", nosoratan'i Charles Darwin.
Betsaka dia betsaka ny zavatra azo lazaina momba an'io boky io, fa ny tiako marihina fotsiny aloha dia izao : talohan'izay dia tsy nijery an'izao tontolo izao ho sistema mitokana ny ankamaroan'ny manam-pahaizana, satria afaka mampiditra ny heriny arak'izay itiavany azy Andriamanitra, fa ny hevitra naroson'i Darwin kosa dia tontolo mitokana : tanteraka ho azy @ fomba natoraly ny fizotra rehetra @'izao tontolo izao raha ampy ny fotoana, izany hoe nanazava ny fomba nipoiran'izao tontolo izao ka tsy mampiditra an'Andriamanitra ny fotopisainana naroson'i Darwin. Manomboka hatreo dia niova tanteraka ny fomba fandraisan'ny olona ny momba ny nipoirantsika.
Ny boky farany nosoratan'i Darwin, t@ 1872, dia nitondra ny lohateny hoe "The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex" (kanefa tokony nivoatra ny olombelona fa tsy nidina ). Narosony t@'ity boky ity ny heviny momba ny haiolombelona, ary angamba efa samy nahita sary mitovitovy @'ity isika.
Raha mahatsikaritra ianareo dia tsy maintsy maintimainty hoditra foana ny akaikikaikin'ny rajako ary tsy maintsy vazaha foana ny farany @ sary tahakan'ireny. Dia gaga ialahy !
Raha tsorina izany dia heverina ho niteraka ny zavamananaina rehetra ny evôlisiona.
Marina aloha fa hevitra mahaliana sady lalina io fotopisainana io. Notsoahana t@ zavatra hita @ voary ilay izy ary nisaina be ireo olona nanorina azy, fa saingy misy olana goavana maro ilay izy.
Raha marina tokoa ny evôlisiona, raha manerana ny voary rehetra tahak'izao ilay izy, tokony mba efa nisy nahita, sa tsy izay ? Kanefa izao tsara no nolazain'ilay tompon-dakan'ny néo-darwinisme sy ny fandavana an'Andriamanitra Richard Dawkins rehefa nakan'i Bill Moyer am-bavany hoe teôria fotsiny ve ny evôlisiona sa zava-misy :
Efa nisy nahita ny evôlisiona, fa saingy tsy mbola nisy nahita azy teo am-pitranganana.
Raha mavesa-danja tahak'izao ny evôlisiona dia tokony mahavita manazava ny fizotra rehetra hitantsika @ zavaboary ilay izy, sa tsy izay ? Anankiray @'izay ny fifamelomana (symbiose).
Ohatrana fifamelomana malaza ny fifanarahan'ny mamba sy ny vorona pluvian.
Rehefa avy nihinana ny mamba dia misy potipoti-kena miraikitra anelanelan'ny nifiny, tahak'antsika olombelona. Fa izy kosa tsy afaka miborosy nify . Ka eo no miditra an-tsehatra ny pluvian : manokatra ny vavany ny mamba ary hanin'ny pluvian ny potipoti-kena miraikitra @ nifin'ilay mamba. Madio ny nifin'Itrimo ary mahazo sakafo maimaim-poana ny pluvian. Ka mipetraka ny fanontaniana : @ fomba ahoana ary no nanombohan'ity fihetsika fifamelomana ity ?
Andeha isika hanandrana hanazava an'izay @ fomba tsy mampiditra an'Andriamanitra an-tsehatra. Indray andro, hono, tapitrisa taona lasa izay (aza adino ny tapitrisa taona an, fa raha tsy izay tsy mety ) nanatona ny pluvian Ratrimo miaraka @ saina fotsy ary nanao hoe : "Mampijaly ahy re ny nifiko ka aoka isika hifanaraka. Azonao hanina ny hena miraikitra anelanelan'ny nifiko dia omeko toky ianao fa tsy hihinana anao aho". Dia navalin'ny pluvian hoe : "Izaho angaha heverinao ho mora ambakaina tahak'izao ? Tsy maintsy misy tonta hafa mialanalana izay hanome lanja ny fifanarahana !" Dia nantsoina ny fianakaviambe iraisam-pirenena ary nosoniavin'izy 2 ny "fôideroty" dia nanomboka teo ny teteza-mihitatra...
Eny e, hatsikana no nentiko anazavàna an'izay fa izao no tiako ahatongavana : tsy hay entina anazavàna an'izay ny fiovaovana tsikelikelin'ny evôlisiona !
Hoy i Albert Szent-Gyorgyi, izay nahazo amboara Nobel, hoe :
Toa tsotra kely ilay izy, kanefa mila fiota (reaction) mifanesisesy maro miaraka @ fizotra ara-pitatitra (nerveux) lalina dia lalina eo ambadika. Ny ankevikevin'ny (chance) niaraha-nitrangan'izay @ alalan'ny sampona kisendrasendra dia HAOTRA. Tsy haiko ny manatrika an'ity olana ity raha tsy mihevitra fa manana "fironana" natoraly hanatsara ny tenany ny zaka manan'aina (matiere organique).
Fironana inona kay izao ? Avy taiza ?
Farany dia omentsika an'i Gilbert K. Chesterton (1874-1936), ilay mpahaifotopinoana (apologète) malaza, ny fitenenana :
"Ny aiza @'ireto filazàna ireto no mety kokoa ?
Ny milaza fa namorona ny zava-drehetra avy @ habaka Andriamanitra sa ny milaza fa ny habaka no voarindra ho azy ka nanjary ny zava-drehetra ?"
Tsy maintsy mino ny faha-2 ny mpandala evôlisiona. Mazava loatra fa tsy afaka mipoitra avy @ habaka ny lalàna, kanefa misy ny lalàna izay mifehy ny fizotra rehetra @'izao tontolo izao. Fotopisainana mifototra @ tsy misy fotony ny evôlisiona, ary nikely aina mihitsy i Chesterton mba hampiharihary an'izay.
Nehemiah - 27/04/2013 14:06
Io ny rohy mankany @ fizaràna fahefatra ho an'izay liana :
Miharena - 29/04/2013 04:28
Mahaliana ilay fanadihadiana fa ny momba ny hoe evolisionisma lazainao fa tsy mahazava na inona na inona no misy mandringa. Fandinihina ny zavamisy ara-materialy misy ny toebatan'ny voary tsirairay no ataon'ny mpahay siansa ary fiezahana hampifandray izany fitoviana sy fahasamihafana misy izany ao anaty sandrahaka ka hahafahana mahita ny sampana nipoiran'ny voary samihafa miainga amin'ny zavamananaina sela tokana.
Ny filozofia ny antony namoronana ireo karazana ireo no tokony hadihadiana kokoa raha hampiditra ny sehatra famoronana isika.
Raha ny momba ny Mpamorona indray dia sehatra hafa mihitsy no tokony hijerena azy dia ny siansa momba ny fanahy sy ny teolojia. Fa raha toa ka voafetra amin'ny fiasan'ny fanahy fotsiny no ijerena azy fa tsy ny fiantraikany amin'ny fiainan'ny karazana dia tsy misy fahamarinana azo antoka hivoitra ihany koa.
Efa misy izao ny siansa milaza ny hoe inona no singan'aina fototra namoronana izao rehetra izao ary misy Malagasy aza nilaza fa nahita izany. Ny olana fotsiny dia hoe tsy niresaka ny tao ambadika izy fa ilay singa ihany no hany hitany sy naharesy lahatra azy fa io no singa famoronana.
Nehemiah - 29/04/2013 05:46
Entaniko hiverina @ fizaràna talohan'iny ianao satria efa voavaliny izay.
Nehemiah - 29/04/2013 06:08
Io indray ny rohy mankany @ fizaràna manaraka :
Page rendered in 1.9306 seconds